> Resource > iPhone > Apple iPhone 1: Generation Koobaad ee iPhone Kharashka Illaa $10.000
Hore iPhone ayaa qarka u saaran inuu noqdo 'huriye'
IPhone asalka ah - iPhone 2G la sii daayay on June 29, 2007, iyada oo 3.50-inch 320x480 bandhigay, ku shaqeeya by processor 412MHz, garab RAM 128MB iyo 2-megapixel camera gadaal. Lix sano ka dib markii la bilaabay, Apple u muuqda inuu qarka u saaran inuu kala saaro ay jiilka kowaad ee model sida "guridda" ee dalka Mareykanka iyo "huriye" ee dunida inteeda kale ka. Tan iyo markii uu ku dhawaaqay in June, 2013, taas iPhone "guridda" noqdo kulul mar kale.
iPhone 2G maalinta Arbacada ah: Illaa $10.000
Qof waa la iibiyo ah la furin Apple iPhone 1aad Generation: 8GB (AT & T) 2G, maalinta Arbacada ah ee Bogani yar oo ka qiimo asal ah oo dhan $ 599, kaliya $10.000, iibiyaha sheegtay in ay tahay "DHIF HORREEYA ururiya SET".
Qarni kale oo hore iPhone waxaa u socday $ 5.499, iyo iibiyaha qoray "ururiya BOX daboolay aad dhif u NEW".
Sida muuqata, inta badan dadka wax ugu bixinwaydeen doonaa lacag aad u badan u sida iPhone jir. Laakiin sida iPhone ugu horeysay ee (iPhone 2G), waxaa goob joog waqtiga dahab ah Apple. Sidaas, tani waa in ay u enthusiast ee ururinta. Laga soo bilaabo tan, ma ahan adag tahay in la sheego sida Apple ayaa dunida oo dhan bedelay.
Apple iPhone 2G (jiilka 1-deedii) Details oo muhiim ah:
Display Processor Kaydinta Camera Rear
Resolution RAM OS Camera Front
320x480 pixels 128MB macruufka 3 No
Performance 1 iPhone
Dhexgalka Calaamaysan telefoonka iyo computer
Internet Wanaagsan iyo muuqaalada iPod
Qalab Near kooxda kacaanka qabsaday
Nolosha Battery u baahan yahay horumar
Network EDGE waa slowish
Shilalka barnaamijka Qaar ka mid ah
Leheyn headphones badan
Adeegga macaamiisha AT & T dhiman
Kabsado fariimaha tirtiray ka iPhone : Tilmaan-bixiyahan waxa ay muujinaysaa sida ay u soo ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone siyaabo kala duwan aad. Ladnaansho iPhone Xiriirada : Waxaad soo kaban karto xiriir la tirtiro iyada oo aan raad raac ah oo ku saabsan iPhone leh 3 tallaabo istareexsan. Ladnaansho Videos on iPhone : muujinaya Maqaalkani sida inuu ka soo kabsado lumay videos on iPhone laba siyaabood. Ladnaansho iPhone Photos : sawiro masaxay weli la soo kabsaday kartaa iPhone. Waxaad xalka waxaa ka heli kartaa. Ladnaansho Notes ka iPhone : Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo, si ay u soo ceshano qoraalada lumay on iPhone ah in talaabooyin. Ladnaansho Call History on iPhone : kabsado Waxaad kartaa liiska wac iPhone si toos ah uga iPhone ama gurmad Lugood, oo ay ku jirto soo socda, . xilka iyo seegay calls Ladnaansho iPhone farriinta codka , Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sababta looduubay oo la raadsan karo iyo sida dib u soo ceshano looduubay oo iPhone laba siyaabood.
Download version tijaabo ah iPhone software kabashada xogta inuu ka soo kabsado xogta lumay ee aad iPhone, iPad iyo iPod taabto.